Maitiro ekugonesa mafaira emafaira mu macOS Mojave | Ndinobva mac
Maitiro ekugonesa mafaira emafaira mune macOS Mojave
Ignatius Room | | MacOS Mojave, Tutorials
Kubva Muvhuro wapfuura, iyo nyowani vhezheni ye macOS yeMac makomputa, ayo akarova pamusika kubva 2012, yave kuwanikwa pasi pezita reMojave. Ndiri kubva kuMac, isu takaita akasiyana Tutorials kutiratidza ndeapi mabasa makuru izvo iyi vhezheni itsva inotipa uye mashandiro avo.
Pasina kupokana, imwe yeiyo yakakwezva kutarisisa panguva yeWWDC 2018 umo macOS Mojave yakaunzwa, ndiyo nzira yakasviba, a nzira yakasviba iyo iri nyore kwazvo kuishandisa sezvatinokuratidza mune ino chinyorwa. Chimwe chitsva, kunyanya kune vasina kurongeka zvakanyanya mune mashandiro emafaira kana masaga muChirungu.
Iri basa rinotarisira otomatiki ronga mafaera ese pa desktop zvinoenderana nerudzi rwefaira iri. Nenzira iyi, nekumisikidza iri basa, rinova rakaremerwa, tinogona kukurumidza kuchenesa desktop yedu nekumisikidza mafaera ese pamwechete kuita mirwi.
Al tinya pane yega stack yemafaira, ese aya akaunganidzwa anoratidzwa kuitira kuti tigone kuyanana navo sekunge vasina kuiswa mumapoka. Kana iwe uchida kumisikidza iri basa, saka isu tinokuratidza maitiro ekuzviita.
Kana isu tatova neakawandisa huwandu hwemafaira pane desktop yedu, isu tinongofanirwa kuenda kunzvimbo isina chinhu pane desktop yedu, tinya kurudyi mbeva bhatani, kana tinya neminwe miviri kana tikashandisa iyo trackpad uye tinya sarudzo Shandisa mabhatiri.
Panguva iyoyo, tichaona kuti sei mafaera ese achaiswa mumirwi, zvinoenderana nerudzi rwefaira ivo. Mune yangu kesi, sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, macOS akaisa mafaira mukati megwaro, mifananidzo, screenshots, nezvimwe. Iwo matura akagadzirwa akatwasuka uye isu hatigone kuafambisa iwo kutenderera desktop, basa iro Apple inogona kuwedzera mune ramangwana kugadzirisa.
Kana tichida mafaera ese dzokera kunzvimbo yavo yepakutangaIsu tinongofanirwa kuita yekumashure maitiro uye kumisikidza iyo Shandisa mabhatiri sarudzo. Panguva iyoyo, mafaera ese anodzokera kunzvimbo yavo yekutanga
1 Maitiro ekuboka matura
2 Maitiro ekudzima mafaira emafaira
3 Yangu Mac haienderane neMacOS Mojave asi ini ndoda kushandisa mafaira emafaira
4 Maitiro ekuvandudza macOS Mojave kubva pakutanga
Maitiro ekuboka matura
Sezvandambotaura pamusoro apa, rimwe remabasa ayo macOS anofanirwa kusanganisira mune ramangwana kugadzirisa ndiko mukana we fambisa mabhatiri atinogadzira akatenderedza tafura, sezvo ivo vachingowanikwa kuruoko rwerudyi rwechidzitiro chakamira, chimwe chinhu chingangodaro chisiri chakanyanya kukodzera kune vazhinji vashandisi uye vanosarudza kuzviisa pamusoro pechiso chakatwasuka.
Kunyange ichiri chokwadi, kuti sarudzo mabhatiri haina chero gadziridzo yekuwedzera, macOS inotipa akateedzana ezvigadziriso kuti tikwanise kuodha izvo zvinoratidzwa mukati mazvo. Kana mabhatiri achinge amisikidzwa mune macOS, tinodzvanya zvakare nekobhatani rerudyi mbeva kana neminwe miviri kana tikashandisa nzira yekuwana menyu kwatinomisazve.
Pasi chaipo pazasi, sarudzo nyowani inonzi Boka Stacks By inoratidzwa. Sarudzo idzo macOS dzinoita kuti dziwanikwe kwatiri ronga matura na:
Zuva rekupedzisira rekuvhura
Paunodzvanya, semuenzaniso, Yekupedzisira Kuvhura Zuva, macOS icharatidza zvitutu zvakarongeka zvinoenderana nemwedzi kana zuva ravakapedzisira kuvhurwa. Nenzira iyi, zviri nyore kwazvo kuwana magwaro azvino uno atakagadzira nekugarisa pane yedu macOS desktop.
Kana tikashandisa zvinyorwa zve, mabhatiri inozoratidzwa maererano nemazita iyo yatakatarisa nayo mafaera, kuti tikwanise kuwana mafaera nekukurumidza zvakanyanya zvichienderana nesarudzo yedu kana kunyora mazita.
Maitiro ekudzima mafaira emafaira
Sezvo Apple ichitipa sarudzo yekusangana pamwechete mhando dzakasiyana dzemafaira atakawana pane desktop yedu, zvakare inotibvumidza kuadzima pamwechete, sarudzo inogamuchirwa, kunyanya kana isu tazopedzisira tafunga kuisa odha padhesiki redu.
Kuchenesa matura emafaira ayo macOS akagadzira painenge ichiita iri basa, isu tinongofanirwa kudaro fambisa murwi wemafaira kubhinya rekudzokorora. Paunenge uchiedza kudzoreredza mafaera kubva mumarara, dai zvaive zvakadaro, iwo haazobatanidzwa pamwechete, saka isu tichafanira kuenda rimwe nerimwe tichitarisa kuti ndeapi atinoda kudzoreredza kana kuadzosa ese kudesktop uye kutarisa mabhatiri iyo yakagadzira iyi sarudzo, kana tichiri nayo yakashandiswa pakombuta yedu.
Yangu Mac haienderane neMacOS Mojave asi ini ndoda kushandisa mafaira emafaira
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, Apple yakasiya kunze kweichi chigadziriso zvese zvishandiso pamberi pa2011 (zvabatanidzwa), kuva iwo chete mamodheru anoenderana iwo ayo akatangwa nekambani kubva 2012. Kana iwe uchida kunakirwa nebasa iri, asi une Mac isingatariswe pakati pemidziyo isingaenderane, mumwe wangu Jordi akaburitsa chinyorwa mazuva mashoma apfuura kwatinokuratidza tingaiisa sei kutora mukana wezvinhu zvitsva.
Kana iwe usina nguva kana chishuwo chekuomesa hupenyu hwako zvishoma kuti ukwanise kutora mukana wezvinhu zvitsva izvo macOS Mojave inotipa, iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu, nekuti zvirokwazvo mumwe mugadziri anotangisa chishandiso chinokutendera kuti ushandise iri basa uye ichawedzera matsva ekugadzirisa maficha asingawanikwe natively.
Maitiro ekuvandudza macOS Mojave kubva pakutanga
Hongu, zvakadaro hauna kusarudza kuisa yazvino vhezheni ye macOS inowanikwa yeMac inowirirana, zvakare mumwe wangu Jordi akagadzira yakanakisa dzidziso kwatinokuratidza matanho ese ekutevera kuitira ita kumisikidza kwakachena kwe macOS Mojave.
Kutenda kuICloud, zviri nyore kwazvo kuita backup yemafaira edu ese. Zvakare, nguva dzose kuiswa kwakachena zvakakwana kunokurudzirwa yeimwe neimwe nyowani vhezheni yeanoshanda system, zvisinei kuti tiri kutaura nezve komputa kana nhare mbozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Mojave » Maitiro ekugonesa mafaira emafaira mune macOS Mojave
Aquavias, mutambo unonakidza watinofanira kudzivirira kusanaya nekuvaka migero yemvura
Mojave Inoenderana VMware Fusion 11 Inosvika uye Hardware Optimizations